योगेशले शेयर गरेको किर्ते विज्ञप्ति झलनाथ खनालको नामबाट कसले निकाल्यो ? - Kantipath.com
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पूर्वप्रधामन्त्री झलनाथ खनालको नामबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा उनको विचारसँग नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। अहिले नेकपा एमालेमा चर्केको शक्ति संघर्षमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एक ठाउँमा छन्। खनाल–नेपाल पक्ष र ओली पक्षबीच सहमति भई पार्टी एकजुट राख्नुपर्छ भन्ने पक्ष र अब ओलीसँग एकठाउँमा रहनै सकिँदैन भन्ने मत राख्नेहरुबीच मतभिन्नता देखिन्छ।
खनालकै हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर पार्टीमा उनकै समूहका केही नेताले त्यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको खतिवडाले आरोप लगाएका छन्। बुधबार भारततर्फ उपचारका लागि जानुअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर विज्ञप्ति जारी भएको खतिवडाले बताए।
विज्ञप्ति एमाले नेता भीम आचार्यले तयार पारेको बुझिएको छ । ओली सँग मिल्न तयार भएका भनिएका योगेश भट्टराईहरुले पनि त्यहि बिज्ञप्ति प्रचार गर्नुले घटना झन् रहस्यपूर्ण बनेको छ । नर्भिक अस्पतालमा उपचार गरिरहेका खनालको बिज्ञप्ति कसले तयार गरेको हो खुल्न सकेको छैन ।
खनाल–नेपाल समूहका अर्का नेताले ओलीसँग सम्झौता गरेर भए पनि उनीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कुनै नेताले सो विज्ञप्तिमा त्यस्तो भनाइ घुसाएको हुनसक्ने बताए। सो विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा भीम आचार्यलाई पछिल्लो समय सहभागी गराइएको छ। आचार्य खनालका निकटका नाता पर्न व्यक्ति हुन ।
खतिवडाले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस:
स्वदेशमा उपचार नहुने परिस्थितिमा बिदेशमा उपचार गर्न जानुभएका क. झलनाथ खनालको नाममा उहाँको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी बक्तब्य जारी गर्नु निकै नै दुखद छ। श्वास प्रश्वासमा समेत गार्हो भइरहेको अवस्थामा झलनाथ खनालले यस्तो वक्तब्य लेख्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। वक्तब्यमा उल्लेखित बिचार क. झलनाथ खनालको विचारसंग मेल खाँदैन।
उहाँ प्लेन चढिसकेपछि यो वक्तव्य आउनु आफैमा रहस्यमय छ। पार्टीमा एकता गर्नको लागि क. खनालको वक्तव्यको चालबाजी रची कार्यकर्तालाइ दिग्भ्रमित पार्नु नै पर्दैन। सर्वोच्चको फैसला, आदेश र विधानको ब्यबस्था बमोजिम खुला सम्बाद गर्दा हुन्छ। बिग्रेको सच्याउछु भनी सच्याउदा हुन्छ। एजेण्डाहरु सम्बोधन गर्दा हुन्छ। यस्तो नाटक गरिरहनु पर्दैन।
क. झलनाथ खनालले खण्डन गर्नु भएमा यो नाटक बन्द हुनेछ। तर उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ। आदरणीय नेताको बिरामी अबस्थालाइ कसैको राजनीतिक स्वार्थको घैटो भर्नका लागि अपमान नगरौं। म क. झलनाथ खनालको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
Previous Previous post: देशभर बाढीपहिरोको बितण्डा : सरकारका मन्त्री १०१ किलोको माला लाउनै ब्यस्त !
Next Next post: अभियन्ता संग्रौलालले ‘सरुवा गराइदिने’ चेतावनी दिएका असईकाे सरुवा